PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-21 - Uke waba ngunogada usandy B
Uke waba ngunogada usandy B
Ilanga langeSonto - 2018-01-21 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
“HAWU, laze lafika nami elami ithuba engangilifisa ukuze abantu bazi ukuthi indlela eya empumelelweni kayilula.”
Lawa ngamazwi ahambisana nenjabulo ashiwo ngumculi ophinde abe ngusomabhizinisi, usandy B, ngesikhathi ngimfica lapho esebenzela khona eglenwood, ethekwini, ntambama ngolwesine, ematasa ekhiqiza ama-cd.
Ubejatshuliswa wukuzwa ukuthi ngizophola naye ukuze asazise ngempilo yakhe. Ngesonto eledlule, ILANGA Langesonto lishicilele udaba lukasandy B owaziwayo embonini yezomculo, olumayelana nobuhlungu bokungazazi isibongo sakhe sangempela noyise omzalayo.
Phezu kokuba engazazi ukuthi ungowakwabani isibongo, engamazi noyise, kodwa lokhu akuzange kumenze ahlale dekle, alibale wukubalisa ngosizi lwakhe, kodwa uqhubekile nempilo, waphanta, ebamba lapha nalaphaya. Namhlanje unesitudyo somculo esihle asebenzela kusona.
Usandy B ogama lakhe langempela ngusandile Bhengu okuyisibongo salapho kwakushadele khona unina, unenkampani ebizwa ngemega Star, esethekwini. Estudyo sakhe uqopha umculo, aphinde enze i- artwork - umculi umqala phansi aze amkhiphe phezulu.
Ubuye adayise izimpahla zabaculi ezingajwayelekile kanti enjalo nje uthatha izithombe zabakhangisi bengqephu.
AKAFUNI UKUSHO UNYAKA AZALWE NGAWO
Uzalwa ngunkk Duduzile Mamthethwa Bhengu - ungowesihlanu kubantwana bakanina abayisi-8. Unina umthole behlala elokishini lasempumalanga, ehammarsdale, ethekwini.
Akafuni ukusho unyaka oqondile azalwe ngawo uvele athi kwanele ukuthi wazalwa zili16 kuzibandlela (December) eminyakeni yangowe-1970's. Ufunde amabanga aphansi enyosini Lower Primary, Okhozini Higher Primary nasegabigabi Secondary - zonke ezisehammarsdale.
Kuthe esemncane ehammarsdale wathathwa yindoda eyisihlobo ayibiza ngomnu Koto Nxumalo yasechesterville.
“Ngiyambonga lowo baba yize engasekho. Ungenze ingane yakhe, engithathe ngineminyaka eli-14 ubudala ngahlala echesterville, ngafunda echesterville Secondary ustandard 7 no-8 wangaleso sikhathi. Ngihambe nabangani bami sayofunda esikoleni ebesibizwa ngesimtholile Secondary School efernie, epiet Retief, emngceleni waseningizimu Afrika neswazini. Yilaphoke engifunde khona ustd 9,” kulanda usandy B.
UKE WABA NGUNOGADA
Uthi ngesikhathi efunda kulesi sikole, ubekwenza konke okungamngenisela imali, njengokuthatha izithombe, ukucula nokudlala imidlalo yeshashalazi. Uthi yilapho-ke ethole khona ingane yokuqala edlule emhlabeni ngowezi-2013 isineminyaka engama-23.
Ubuyele echesterville eyokwenza umatikuletsheni nokho akakwazanga ukuthola imi- phumela emihle ngenxa yokuxabana nothisha. Emuva kwalokho ubambe amatoho engunogada ezitolo ezinkulukazi ethekwini.
Uke wacula eqenjini lomculo wokholo iliving Voices, wabe eselishiya wacula neyoung Olives ebiholwa ngunana Mhlongo. Akabange esabheka emuva kwezomculo - wajoyina iqembu iparadogs ebelishaya i- jazz ethekwini, bedlala kumanight club.
Khona lapho ubebuye azihlanganise nezombusazwe, egqugquzela intsha emzabalazweni, ngaphansi kwenhlangano i-united Democratic Front (UDF).
“Ibhizinisi nokugaya ama-cd ngiliqale ngingenalutho ngicabangela abaculi bakwazulu-natal abebesuka lapha baye egoli beyogayelwa ama-cd.
"Ngiqale ngisebenzisa ikhompyutha eyodwa, ngikhiphe ICD ngayinye ngingalali kuze kuse ngifuna ukuqeda isitokwe. Bekuthi uma ngibona ukuthi umsebenzi ungaphezu kwamandla ami, ngiwudlulisele egoli, ngibacele ukuba bawasheshise.
"Ngiphinde ngakhipha i-albhamu ebisihloko sithi “Amajovijovi” eyadayisa kahle kakhulu. Ngibe sengingena nasekusizeni abaculi abadumile njengodj Bongz,” kusho yena.
Evala inkulumo ekhethekile abe nayo NELANGA Langesonto uthe: “Amazwi engiphetha ngawo ngithi abantu abangazithambisi balibale wukubalisa ngoba bengabazi oyise noma onina, osekwenzekile kwenzekile mabaqhubeke nempilo baye phambili.”
UBUYE abe ngumlingisi wamafilimu nemidlalo kamabonakude usandy B. USANDY B nendodakazi yakhe unandi. USANDY B enomculi we- gospel wase-usa, uyolanda Adams. UNEBHIZINISI lemfashini usandy B USANDY B nomculi wecyril Neville Brothers wase-united States of America (USA). USANDY B nezindondo ahlabane ngazo kwezomculo.